KërKodou ebhekene nolwandle: indlu yasolwandle! - I-Airbnb
KërKodou ebhekene nolwandle: indlu yasolwandle!
Popenguine, Thiès, i-Senegal
I-ikhaya ephelele ibungazwe ngu-Kodou
I House "KërKodou" itholakala ngakwesokudla phezu kwamanzi ogwini ethule Choupam in Popenguine: kuyokuvumela ngokugcwele ukujabulela ukubhukuda kanye sunsets olwandle. Inamagumbi okulala angu-4 namagumbi okugezela angu-2, ingahlalisa umndeni omkhulu noma iqembu elincane labangane (kufika kubantu abangu-10). Itholakala ukuhamba ngemizuzu engu-5 isuka endaweni yokugcina imvelo ye-Popenguine, eduze nezindawo zokudlela eziningi nemizuzu engu-10 isuka maphakathi nedolobhana.
Lala uhlekiswe umsindo wamagagasi.
Iminikelo yezindawo zokudlela eziseduze namathilomu ihlukahluka. Izitolo eziningana zokudla ezitholakala kude ngemizuzu engu-5 zizokuvumela ukuba uthenge izinto ezibalulekile noma isidlo sakusasa. Phakathi nokuhamba kwemizuzu engu-10, uzokwazi ukungena enkabeni yedolobha elincane lase-Popenguine, izitolo zalo ezincane, imakethe kanye nendawo yawo edumile yoku hija yazo zonke iziqhingi zaseNtshonalanga Afrika. Indawo yokungena nehhovisi lokugcina imvelo le-Popenguine lihamba ngezinyawo ngemizuzu engu-5 ukusuka endlini. Izindawo zezivakashi zase-Kusarou, e-La Somone nase-Saly zikude ngemizuzu engu-30-40 ngemoto. Cishe imoto yehora iya e-Dakar-plateau futhi isigamu sehora kuphela ukuya esikhumulweni sezindiza i-Ndiass AIBD.
C'est l'été et la période des baignades, afin de vous assurer d'un séjour agréable et ressourçant chez kërkodou, vous êtes conviés à user de la douche extérieure pour le rinçage du sable avant l'accès aux salles de bain. Dernièrement nous avons été confrontés à un soucis de plomberie, c'est désormais derrière nous, le dessablage de la tuyauterie de la maison est achevé....
Nous souhaitons à toutes et à tous de très bonnes vacances dans l'espoir de vous accueillir à nouveau et dans les conditions les meilleures.
Merçi à vous chers hôtes
C'est l'été et la période des baignades, afin de vous assurer d'un séjour agréable et ressourçant chez kërkodou, vous êtes conviés à user de la douche extér…
Kodwa ngisengafinyelelwa ngocingo nge-imeyili nangocingo (nge-hatshap) kukho konke ukuhlala kwezivakashi. Esayithini, umphathi wendlu uzonakekela ukwamukelwa nokufakwa kwakho endlini. Angakusiza futhi uma kunesidingo semisebenzi yansuku zonke (ukulungiselela ukudla, ukuhlanza, ukugijima, njll.), isimo okufanele sixoxiswane ngqo nomuntu onentshisekelo.
Kodwa ngisengafinyelelwa ngocingo nge-imeyili nangocingo (nge-hatshap) kukho konke ukuhlala kwezivakashi. Esayithini, umphathi wendlu uzonakekela ukwamukelwa nokufakwa kwakho endli…